भोलि बिहीबारको राशिफल सुपा देउराली मन्दिरको दर्शन गरि पढ्नुहोस् - Nepal Insider
भोलि बिहीबारको राशिफल सुपा देउराली मन्दिरको दर्शन गरि पढ्नुहोस्
January 15, 2020 576
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) : शुभ तथा मांगलिक कार्यमा सहभागि भई बिभिन्न परिकारको स्वाद लिदै दिन कटाउँन सकिनेछ । माया प्रेममा नजिक हुने तथा बिश्वास गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ । घर परिवार तथा जीवन साथिको सहयोगले राम्रा तथा उपलब्धिमुलक कामहरु हुनेछन् । पढाई लेखाई अरु दिन भन्दा सुधार भएर जानेछ भने कुनैपनि प्रतिश्पर्धामा प्र”तिश्पर्धि’हरुलाई सजिलै हराउन सकिनेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) : अध्ययन तथा अध्यापनमा सफलता हात लाग्ने हुँनाले घर परिवार तथा आफन्त जनहरु खुसि हुनेछन् । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने आर्थिक रुपमा सुदृड हुँने समय रहेकोछ । पुराना लेनदेन तथा पुराना अल्झिएर बसेका कामहरु फत्ते गर्न सकिनेछ । आफन्त तथा मावली पक्षसँग मिलेर गरिने कुनैपनि काम हरु स्वत स्फुर्त रुपमा अगाढि बढ्नेछन् । पुराना स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या हरु हल भएर जानेछन् । खर्च बढेपनि राम्रा कामहरु गर्न सकिनेछ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) : व्यापार व्यावसायमा लगानि गरिहाल्ने समय नरहेकोले तत्काल नयाँ काम नगर्नुनै राम्रो रहनेछ । भौतिक सम्पति तथा स’वारि साधनको प्रयोग तथा परिचालन गर्दा ख्या’ल गर्नुहोला अप्रिय घटना नहोला भन्न सकिन्न । आत्मिय मित्र तथा परिवारका साथ रहेर स्वादिष्ट भोजनको टे’ष्ट लिने अवसर जुर्ने भएपनि खानपानको तालमेल नमिल्दा सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउँन सक्छ ध्यान दिनुहोला ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) : राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको आ’लोच’नात्मक समर्थन प्राप्त हुनेछ । घर जग्गा तथा गाडि घोडाको व्यावसाय बाट केहिमात्रमा लाभ लिन सकिनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसाय फस्टायर जानेछ । मित्रहरुको लहै लहैमा लाग्नाले पढाई लेखाई कमजोर रहनेछ । साथिभाईहरुको गलत संगतले नक’रात्मक सोचको बिकास हुनेछ भने नियम बिपरित काम गर्न उक्साउने हरु सक्रिय रहनेछन्।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) : न्यायलयबाट हुँने न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । बादबिवाद,प्रतिश्पर्धा तथा मुद्दा मामिलामा तपाईकै जित निश्चित छ । जनसम्पर्क बढ्ने तथा दाजुभाई,छिमेकिबाट भनेजस्तो सहयोग पाईने हुँनाले मन प्रशन्न रहनेछ । आफुभन्दा बिशिष्ट ब्याक्तिसँगको भेटघाटले नयाँ योजना बनाउँन सहयोग पुग्नेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) : समयमा काम नबन्नाले आय आर्जन घट्ने तथा सापटि लगिएका रकम हरु समयमा फिर्ता हुनेछैनन् । व्यापारमा लगानि गरेपनि आम्दानि कम हुनेछ । आफन्त तथा घर परिवारका मानिसबाट सहयोग पाईने हुँनाले मन प्रशन्न रहनेछ । माया प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुलाई समयले साथ दिनेछ । पढाई लेखाईमा तपाईको नाम अग्र स्थानमा आउँने हुँनाले थप हौसला बढ्नेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) : नयाँ नयाँ प्रेम प्रस्ताव आउँने तथा माया प्रेममा आफ्नो मायालुलाई आफ्नै आखाँको वरिपरि देख्न पाउँदा मन खुसि हुनेछ । राजनितिक सभा समारोहमा जमघट भई स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ भने समाजमा मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठा बडेर जानेछ । अध्ययन तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा ठुलो प्रगति गर्न सकिनेछ भने सबैतिरबाट तपाईको काममा सहयोगको हुनेछ । आफ्नो सिर्जना अरुले मन पराई दिनाले मन प्रशन्न रहनेछ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) : लामो दुरिको यात्राको अधिक सम्भावना रहेको छ । स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्याले सताउँन सक्छ खानपानमा ध्यान दिनुहोला । जुझारु साथिहरुको संगतले नयाँ कुराको खोज तथा अनुशन्धान गर्ने जागर आउँनेछ । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा प्रतिश्पर्धिहरुलाई हराउँदै चाहेको गन्तब्यमा पुग्न सकिनेछ । शुभ तथा मांगलिक सभा समारोहमा सहभागि भई स्वादिष्ट भोजनका साथ दिन कटाउँन सकिने हुँदा मन प्रशन्न रहनेछ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) : कार्य क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव जमाउन सकिने हुदा मान सम्मानमा बृद्धि भएर जानेछ । भुमि,बाहन तथा भौतिक बस्तुका प्रयोग मार्फत मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ । दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर बन्नेछ भने प्रेम सम्बन्ध सुदृड हुनेछ । अध्यनमा प्रगति हुँने हुँदा बिद्यार्थि वर्गका लागि आजको दिन फलदायि रहनेछ । नयाँ प्रबिधिको प्रयोग गरि शुरु गरिएका कामहरु समयमा सम्पन्न हुने तथा मनग्गे आम्दानि पनि हुनेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) : नयाँ काम पाउँने तथा बढुवा हुँने योग रहेको छ । राजनिति तथा समाज सेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ । समाजको मन जित्ने काम गर्ने अवसर जुर्ने हुँनाले मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठामा बृद्धि भएर जानेछ । निर्णय क्षमतामा बृद्धि भएर जाने तथा कार्यालयमा तपाईको निर्णय क्ष’मताको उच्च कदर हुनेछ । व्यापार व्यावसाय बाट मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) : कामहरु बिग्रने हुँदा मान सम्मान तथा ईज्जत प्रतिष्ठामा कमिको महशुष हुनेछ । प्रशासनिक कामकाजमा झन्झटिलो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेछ भने सेवा प्रवाह गर्नेहरुले समयमा तपाईको काम नगर्दिनाले महत्वपुर्ण अवसरहरु गुम्न सक्छ । परिवार तथा आफन्तजन लाई समय दिन नसक्दा म’नमु’टाबको अवस्था सिर्जना हुनेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्याले सताउने हुँदा मन चि’न्ति’त रहनेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) : आफन्त तथा शुभचिन्तकहरुको सल्लाह तथा शुझाबलाई बेवास्ता गर्दा दुख पाईनेछ । व्यापार व्यावसायमा मन्दि आउने हुनाले आर्थिक रुपमा पछाडि परिनेछ । स्थाई सम्पतीमा बि’वा’द आउने योग रहेकोछ भने भौतिक सम्पति तथा अन्य साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला । दिदि बहिनी तथा आफन्त सँग अनाबस्यक बि’वा’द हुन सक्छ ।
Prevकाठमान्डौको ढुंगेधारामा भएको वि’स्फोटको जिम्मा विप्लव स’मूहले लियो !यसकारण प’डकाएको रहेछ ब’म
Nextआजको राशिफल : वि.सं.२०७६ साल माघ ०२ गते । बिहीबार । ईश्वी सन् २०२० जनवरी १६ तारिख
अस्ट्रेलियामा फेरी अर्को सं’कट, यस्तो आँ’धी आएपछि, स्थानीयहरुलाई सुरक्षित ठाउमा जान आग्रह
नेकपालाई कांग्रेसको प्रश्न – एक व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्ने, के को तमासा ?
‘म मरिसकेपछि’ भन्दै अचानक गरिब दुखीको हिरो शिशिर भण्डारीको यस्तो भिडियो बाहिरियो । सबैलाई रुवायो (भिडियो हेर्नुस)
‘मलाई लगाईएको आ’रोप झु’टो हो’ भन्दै गोकुल बाँस्कोटा अदालत पुगे, मिश्र वि’रुद्ध दिए उ’जुरी
मनछुने कथा “” असल श्रीमती “” महिलाले एकचोटी अबस्य पढौं अनि पुरुषले शेयर गरौँ (42797)
काेराेनाका कारण पहिलाे पटक एक नेपालीकाे ज्यान गयाे (39036)
Coronavirus लाई सामान्य नठानौँ : १०२ बर्ष अगाडी १० करोड मानिसको मृत्युको तथ्य र दृष्य [भिडियोसहित] (16978)
यस्ता ब्यक्तिलाई मात्रै लाग्दछ कोरोना भाइरस ! जानी राखौं (14446)
‘नेपालमा फेरी ८ रेक्टर भन्दा ठूलो भूकम्प जाने सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह’ – अध्ययन प्रतिवेदन (14403)
अस्ट्रेलिया काण्ड: के भएको रहेछ खास ? युवती आइन् लाइभमा (भिडियो) (13428)
रविले डाक्टर रुनालाई सोधे के नेपालमा कोʼरोना नआʼएकै होकी सरकारले सुचना लुʼकायो ? हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (12129)
लकडाउनमा दूध किन्न निस्केका युवाको प्रहरीको लाठीचार्जबाट मृत्यु, परिवारमा रुवाबासि (11443)
नेपालमा त कोरोना भाइरस आएकै छैन भन्नेहरूले एक चोटी अवश्य पढी सचेतनाका लागी सक्दो सेयर गर्नुहोला ! (10520)
नेपालमा कोरोना संक्रमितकहरुको संख्या धमाधम बढ्न थाल्यो (10481)
सुत्ने बेलामा सुपा देउरालीको दर्शन गरि सुत्नु होला ! हर मनोकामना पुरा होओस्
‘कोरोना भगाउन घरघरमा गरियो दीप प्रज्ज्वलन !
लकडाउनको बेला यि चेलीले मृगौला पिडित आफ्नो भाईलाई औषधी खुवाउन पैसा नभएपछि शिशिर भण्डारीले १० हजार सहयोग दिए (भिडियो हेर्नुस्)
कोरोना संक्रमितका १ हजार बढी शव फ्रान्सको मुख्य बजारमा राखियो, चहलपहल उस्तै
अमेरिकाका नेपाली स्तब्ध : कोरोनाबाट यति लोकप्रिय ४ जना नेपालीको एकैदिन निधन